Sunday November 08, 2020 - 13:25:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Fagaara weyn oo ku yaala degmada Galhareeri ee Wilaayada Islaamiga Galgaduud waxaa ka dhacay dibad bax ballaaran oo qeyb ka ah difaaca sharafka Nabigeena Muxamedصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ, Kaasi oo ay dhigeen bulshada k
Bulshada fagaaraha isugu timid ayaa fariin adag u diray dowladda Saliibiyadda Faransiiska ee aflagaadeysay Nabigeena Muxamed صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ, Waxeyna shacabka reer Galhareeri wacad ku mareen iney naf iyo maal u hurayaan difaaca sharafka iyo cirdiga Nabigeena Muxamed صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirrada Banaanbaxa Galhareeri.
Ciidamada AMISOM oo qarax lagula beegsaday degmada Kaaraan.
Sarkaal katirsanaa maamulka degmada Beled Weyne oo ladilay.
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda qarax lagu beegsaday guddoomiyaha degmada Hodon.
Sarkaal katirsanaa ciidanka dowladda oo lagu dilay degmada Baardheere.